ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ DataNumen Access Repair Access အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၏ဘုံအကြောင်းရင်းများ
အဖြစ်များသောအကြောင်းရင်းများ Microsoft Access Database ကိုအကျင့်ပျက်စေခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးစေခြင်း
သင်၏ MDB ဖိုင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ သူတို့ကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ hardware အကြောင်းနှင့် software အကြောင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ Access databases ၏အချက်အလက်များကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းရာတွင်သင်၏ဟာ့ဒ်ဝဲပျက်ကွက်သည့်အခါတိုင်း၊ ဒေတာဘေ့စ်များပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့်အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိပါသည်။
ဒေတာသိုလှောင်ရေးကိရိယာပျက်ကွက်မှု။ ဥပမာအားဖြင့်သင်၏ hard disk တွင်မကောင်းသောကဏ္someများရှိနေပြီးသင်၏ MDB ဖိုင်ကို၎င်းကဏ္sectorsများတွင်သိမ်းဆည်းထားပါက။ ထိုအခါသင်သည် MDB ဖိုင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာဖတ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်ဖတ်ရှုသောအချက်အလက်များသည်မမှန်ကန်ပါ၊ အမှားများနှင့်ပြည့်နေပါသည်။
အမှားကွန်ယက်ကိရိယာ။ ဥပမာ Access Access database သည် server ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး network link များမှတဆင့် client ကွန်ပျူတာမှ၎င်းကိုသင်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားသည်။ အကယ်၍ ကွန်ယက်မျက်နှာပြင်ကတ်များဖြစ်ပါက၊ cabအချို့သောကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသော router များ၊ hub များနှင့်အခြားမည်သည့်စက်ပစ္စည်းမဆိုပြproblemsနာများရှိသည်။
ပါဝါပျက်ကွက်။ MDB ဒေတာဘေ့စ်ကိုသင်သုံးနေစဉ်မီးပျက်သွားလျှင်သင်၏ MDB ဖိုင်များပျက်စီးသွားနိုင်သည်။
ဟာ့ဒ်ဝဲပြproblemsနာများကြောင့် Access database အဂတိလိုက်စားမှုကိုတားဆီးရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်နည်းစနစ်များစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ UPS သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်းပြproblemsနာများကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဟာ့ဒ်ဝဲကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လည်းဒေတာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ထို့အပြင် Access ဒေတာဘေ့စ်ယိုယွင်းမှုများသည် software နှင့်ပတ်သက်သောပြissuesနာများကြောင့်ဖြစ်သည်။
မမှန်ကန်ကြောင်းဖိုင်စနစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ ဖိုင်စနစ်ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းသည် Access ဒေတာဘေ့စ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်သင်တွေ့ရှိနိုင်သည် သို့သော်၊ တကယ်တော့၊ တစ်ခါတစ်ရံသင်၏ဖိုင်စနစ်ပျက်စီးသွားပြီး၊ ၎င်းတွင်ရှိသည့် MDB ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ဒေတာပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကိုငှားရန်ကြိုးစားသောအခါပြန်လည်ဆယ်တင်ထားသောဖိုင်များသည်ယိုယွင်းပျက်စီးနေဆဲဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖိုင်စနစ်ပြdisasterနာကြောင့်မူလ MDB ဒေတာဘေ့စ်၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများမှာဌဖြစ်သည်ost အမြဲတမ်း (သို့) အမှိုက်သရိုက်များဖြင့်ထပ်မံကူးရေးသောကြောင့်နောက်ဆုံးကယ်တင်ထားသော MDB ဖိုင်ကိုမပြည့်စုံစေရန်သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအချက်အလက်များပါ ၀ င်စေသည်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိရိယာ (သို့) ကျွမ်းကျင်သူတွင်လုံလောက်သောကျွမ်းကျင်မှုမရှိပါကသူ / သူသည်အမှိုက်သရိုက်အချို့ကိုကောက်ယူပြီး .MDB တိုးချဲ့ထားသောဖိုင်တစ်ခုအဖြစ်သိမ်းဆည်းသည်။ ဤ .MDB ဖိုင်များသည် Access databases ၏ခိုင်လုံသောအချက်အလက်များမပါ ၀ င်သောကြောင့်လုံးဝအသုံးမ ၀ င်ပါ။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိရိယာ (သို့) ကျွမ်းကျင်သူသည် MDB ဖိုင်အတွက်မှန်ကန်သောအချက်အလက်လုပ်ကွက်များကိုစုဆောင်းထားသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အားမှန်ကန်သောအစီအစဉ်ဖြင့်ပေါင်းစည်းခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက်နောက်ဆုံးပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသည့် MDB ဖိုင်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်၊ file system ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကြုံတွေ့ရသောအခါသင်၏ MDB ဒေတာဘေ့စ်ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်ကောင်းမွန်သော data recovery tool / expert တစ်ခုကိုရှာဖွေသင့်သည်။ မကောင်းတဲ့ကိရိယာ / ကျွမ်းကျင်သူကအခြေအနေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ့်အစားပိုဆိုးစေလိမ့်မယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဝဲ။ Trojan.Win32.Cry ကဲ့သို့သောဗိုင်းရပ်စ်များစွာzip.a, Access MDB ဖိုင်တွေကိုကူးစက်ပြီးဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်။ သင်၏ဒေတာဗေ့စ်စနစ်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်ကိုတပ်ဆင်ရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
ရပ်တန့်စစ်ဆင်ရေးရေးပါ။ ပုံမှန်အခြေအနေမျိုးတွင် MDB ဒေတာဘေ့စ်ပေါ်ရှိသင်၏ပြောင်းလဲမှုအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းပြီးလျှင်“ Exit” (သို့)“ Close” menu ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် Access ကိုလျောက်ပတ်စွာဖြတ်ရမည်။ MDB ဒေတာဘေ့စ်ကိုသင်ဖွင့်ပြီးရေးသားစဉ်က Access ကိုပုံမှန်မဟုတ်သောပိတ်ထားပါက Jet database engine သည် database ကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်သို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောပါဝါပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ပါက (သို့) Windows Task Manager ရှိ“ End Task” ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် Access ကိုရပ်တန့်လိုက်လျှင်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် Access နှင့် Windows ကိုပုံမှန်မပိတ်ဘဲကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားလျှင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည်။
အဂတိလိုက်စားမှုရှိသော Access Databases ၏လက္ခဏာများ -
မင်းရဲ့ရည်ညွှန်းချက်အတွက်ငါတို့စုဆောင်းထားတယ် အကျင့်ပျက် MDB ဖိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်သောအခါအမှားများစာရင်း.
Corrupt Access Databases များကိုပြုပြင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုရထုတ်ကုန်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် DataNumen Access Repair သို့ သင်၏အကျင့်ပျက် Access Access databases ကိုပြန်လည်ရယူပါ.
အဂတိလိုက်စားမှု Microsoft Access MDBs FAQ